Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Fiangonan'i La Digue Island
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
La digue nosy
Rehefa manakaiky ny fetin'ny fiheverana, fantatra amin'ny anarana hoe Lafet La Digue, dia manitrika ny hatsaran'ny nosy isika.
Ny fetin'ny fiheverana, fantatry ny mponina amin'ny anarana hoe Lafet La Digue, dia hetsika lehibe iray izay manintona ny mason'i La Digue rehetra.
Ny fankalazana dia natao nandritra ny andro maromaro niaraka tamin'ny hetsika lehibe tamin'ny 15 Aogositra, ao anatin'izany ny fivoriambe misimisy eny amin'ny "La Grotto" izay iarahan'ny Evekan'i Seychelles.
Ny lamesa dia arahinà filaharana nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny làlan'ny La Digue mankany amin'ny fiangonana St. Mary.
Mitohy amin'ny hetsika ara-kolontsaina, fety an-dalambe ary fampisehoana mozika mivantana miaraka amin'ny mpitendry zavamaneno eo an-toerana ny fankalazana rehefa hariva ny andro. Ny fetibe dia tsy ho vita raha tsy nisy ny fivarotana sakafo nanolotra nahandro isan-karazany, indrindra ny lovia vita amin'ny creole nentim-paharazana ho an'ireo mpitsidika azy. Lafet La Digue dia sary manazava ny fomba fiainana nentim-paharazana an'ny vahoaka Seychellois.
Ny kely indrindra amin'ireo nosy lehibe telo ao amin'ny nosin'i Seychelles, La Digue Island dia malaza amin'ny ody kanto tena izy, mahasarika ny fon'ny mpandeha avy amin'ny faritra rehetra. Miaraka amin'ny rivo-piainany milamina, ity nosy kely ity dia mamadika ny famantaranandro ho amin'ny fiainana ambanivohitra tsotsotra kokoa izay ny dian-tongotra sy ny dian-tongotra bisikileta no tena mampiavaka ny olombelona.
Fitsangatsanganana an-tsambo 20 minitra monja avy eo amin'ny Nosy Praslin, tsy misy seranam-piara-manidina, i La Digue no misy ny morontsirak'i Seychelles tsy voaroaka toa an'i Anse Source D'Argent, iray amin'ireo morontsiraka be mpaka sary indrindra eto an-tany. Mandrosoa amin'ireny morontsiraka misy perila ireny, nopetahany vatokely misy vato granita matevina, izay tsy hita ao amin'ity nosin'ny Ranomasimbe Indianina ity ihany.
Ity nosy kely ity dia mampiverina ny tanana, manome anao fahatsapana ny fomba fiainana Seychellois mahazatra alohan'ny firosoan'ny modernisation, zavatra iray izay tsy fahitana afa-tsy ireo nosy lehibe roa hafa. Raiso ny bisikiletanao manamorona ny morontsiraka mankany amin'ny L'Union Estate Park ary tadiavo ny famokarana copra nentim-paharazana, izay nanamboarana menaka voanio virjiny, ary mandehandeha mamaky ny voaloboka amin'ny voly vanila. Ny Estate koa dia tranon'ny trano fambolena sy ny fanjanahana frantsay-kolonialy ary fasana ho an'ireo mpamboly lavanila.
Any ambany kokoa, any amin'ny faran'ny L'Union Estate, dia ho hitanao fa miakatra amin'ny morontsiraka fotsy any Anse Source D'Argent voahodidin'ny rano turquoise sy vatolampy mamirapiratra. Ny hazo palmie sy ny ahitra maitso any amin'ny manodidina azy dia manatsara ny hakanton'ity toerana exotic ity, izay malaza eo amin'ireo mpizahatany sy ny eo an-toerana. Azonao atao koa ny mipoitra amin'ny alàlan'ny Ile de Cocos manaitra sy snorkel ao ambanin'ny rano mangarahara manakaiky ny zava-mahatalanjona amin'ny fiainana an-dranomasina Seychelles.
Ny lalan'ny natiora maitso emeraoda dia hampanakaiky anao ny natiora tsy mbola nisy toy izany talohan'ny nitarihany anao tamina zava-manan'aina velona. Raha tsara vintana ianao, dia mety hahita ilay takelaka paradisa tsy fahita firy amin'ireo hazo takamaka sy bodamier ao amin'ny fitoerana masin'ny La Digue Veuve Reserve.
Amin'ny fomba nosy tena izy, misakafo miaraka amin'ny tongotrao amin'ny fasika ao amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana amoron-tsiraka ny nosy, na manaikitra eo amin'ny fivarotana amoron-tsiraka. Ny nosy dia hamoaka ny tsiron'ny tsiron-tsakafo miaraka amin'ny tsiro matsiro amin'ny fahandroana kreôla, amin'ny alàlan'ny akora farany indrindra ao anatin'izany ny hazan-dranomasina tratra tsara indrindra ao an-toerana. Mety ho tratranao amin'ireo mpanjono eo an-toerana manao pirogue hazo na mitondra ny vokatry ny asany amin'ny tehina.
Na dia kely sy mangina aza dia mitazona zava-mahatalanjona ho an'ny rehetra i La Digue, mamela fahatsapana maharitra miaraka amin'ny hatsarany sy ny fandraisany vahiny mafana.